SU တွင်ယူရန်အကောင်းဆုံးအတန်းစာရင်းအပြည့်အစုံ - နှုန်းထားများ
နောက်ထပ်တစ်နှစ် (စိတ်မကောင်းပါရစေကျောင်းသားဟောင်းများသူငယ်ချင်းများ) ဤတွင်ရောက်ရှိရန်အလုံအလောက်ကံကောင်းသူများအတွက်အတန်းရွေးချယ်မှုသည်တက်လာနေပြီးမြန်ဆန်စွာတက်လာနေသည်။
အနည်းငယ်သောအခက်အခဲရှိသူတိုင်းအတွက်ရွေးချယ်ထားသောအကြွေးရှာနေသူများထံမှအတန်းများကောက်ယူရန်အခက်တွေ့နေသူတိုင်းအတွက် - မကြောက်ကြနှင့်။ The Tab Syracuse နှင့်သင်၏အတန်းဖော်များသည်ကူညီရန်ဤတွင်ရှိသည်။
ကျယ်ပြန့်စွာရှုမြင်နိုင်သည့် SU တစ်ခုတည်းသောအကြီးမားဆုံးသောအတန်းအစားအဖြစ် FST 412 သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ မင်းပေါ်လာတိုင်းမင်းကဘီယာနဲ့ဝိုင်ကိုအခမဲ့ပေးမလား။ ဘယ်သူမှတိုင်ကြားလို့မရဘူး တစ်ခုတည်းသောဖမ်း: အတန်းပထမနေ့တွင်သင်သည် ၂၁ နှစ်ဖြစ်ရမည်။
လူတိုင်းသည်ဘွဲ့မတိုင်မီဘီယာနှင့်ဝိုင်ကိုလေးမြတ်တန်ဖိုးထားသင့်သည် - ၎င်းသည်လွယ်ကူသော A. လည်းဖြစ်သည် - အကြီးတန်း၊ မဂ္ဂဇင်းဂျာနယ်လစ်။
SPM 199 အကယ်၍ သင်သည်ဘောလုံးကိုတူးမည်ဆိုပါက CFS 388၊ သင်သည်လိင်တူးလျှင်၊ FST 412 ဝိုင်ကိုတူးပါက - အကြီးတန်း၊ CRS & အားကစားစီမံခန့်ခွဲမှု။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အကြံပြုထားသည့် CSD 212 သည်အလွန်ကောင်းသောနိဒါန်းသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သတိပြုရန်မှာသင်သည် CSD 212 နှင့် CSD 303. နှစ်ခုလုံးအတွက်ချေးငွေမရနိုင်ပါ။ သတိထားပါ၊ အခုထိုင်ခုံနှစ်ခုပဲရှိတယ်။
CSD 212 ဟာတော်တော်လေးကိုလွယ်ကူပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ PSY 274 သည် Newman နှင့်အလွန်လွယ်ကူပြီး ETS 400 သေချာသည်။ ဤသည်စာသင်ကအခြေအနေတွင်ဂျိန်း Austen ကြီးနှင့်အတန်းကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပြီးသင်တော်တော်အေးမြဖြစ်ခဲ့သည်ဒါနွေ ဦး ရာသီအဘို့အင်္ဂလန်ကိုသွားရ။ - ဒုတိယနှစ်၊ ကြော်ငြာနှင့်စိတ်ပညာ။
Pellegrino နှင့်အတူ CSD 212! CFS 388 သည်လူတို့၏လိင်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လွယ်ကူသော A ဖြစ်ပြီး၊ အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။
CSD 212 သည် Anita Lightburn နှင့်အတူသူဖြစ်သည်။ Felver နှင့်အတူ PSY 335 သည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်၌တည်ရှိ၏၊ ၎င်းသည်လွယ်ကူပြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်။ - Sophomore, စိတ်ပညာ။
CFS 201, SOC 101, NSD 115 နှင့် QSX 112. စစ်ဆေးရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်၏ GPA သို့လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာလိမ့်မည်။
CFS 201 နှင့် SOC 101 သည်လွယ်ကူသည်။ QSX 112 ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလူသိများတဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အိုးအမျိုးသမီးမဲပေးပိုင်၏သမိုင်းလွယ်ကူသောနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ - Freshman၊ ကလေးဘဝနှင့်မိသားစုသင်အံမှု။
NSD 115 အရမ်းလွယ်တယ်။ ၎င်းသည်အာဟာရသိပ္ပံပညာ၏မိတ်ဆက်ခြင်းသင်တန်းဖြစ်သည်။ ငါဂျက်စီကာ Redmond နှင့်အတူကယူ။ တိုင်းစမ်းသပ်မှု၏အဖြေအခြေခံအားဖြင့် '' ရေအများကြီးသောက်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုစား '' ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလွယ်ကူသည်မဟုတ်ပေမယ့် Palfai နှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လူ့အပြုအမူဒါပျော်စရာ / စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်နှင့်သူထွက်ပြားသူကိုကင်းလုပ်ဖို့ကျောင်းသားများကိုတိုက်တွန်းပါသည်။ Tammy Kordas doe နှင့်လည်း CSD - Senior, ETS, Creative Writing လမ်းကြောင်း။
ငါကိုယ်တိုင် LIT 226 ကိုရုရှားစာပေဂန္ထဝင်ချစ်ခဲ့သည်။ ပါမောက္ခသည်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ - Sophomore အနုပညာသမိုင်း။
ငါဟာလူတွေကသူတို့ဘွဲ့မရခင်မှာ HOA (အနုပညာသမိုင်း) အတန်းတစ်ခုကိုယူသင့်တယ်ထင်တယ်။ HOA ၁၀၅ သည်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ဇယားနှင့်ကျပန်းမကျမချင်းအနုပညာကိုနှစ်သက်ကြောင်းကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ - အငယ်တန်း, TRF ။
NAT 105- လွယ်ကူပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့။ - အငယ်တန်း, TRF ။
သငျသညျ SU လန်ဒန်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင် - အနုပညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်အေးမြသည်။ သင်ပြတိုက်များသို့သွားပြီးအပိုင်းပိုင်းအတု / ဟုတ်မှန်သလား၊ အတိတ်ကပျက်စီးခဲ့လျှင်အနုပညာတွင်မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်နှင့်မည်သို့ငွေရှာရမည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ပါ။ - အငယ်တန်း၊ ဆက်သွယ်ရေးသိပ္ပံနှင့်ရောဂါ
ပါမောက္ခစတိဗ် Kuusisto (သူတစ် ဦး အရူးပါရမီရဲ့သူ Oprah အပေါ်ခဲ့) နှင့်အတူဘာမှ။ သူ၏ lit အတန်းများသည်လွယ်ကူသော A ဖြစ်ပြီးဘဝပြောင်းလဲခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ - Sophomore၊ ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်လူမှုဗေဒ။